Kodi 19 Matrix inouya nerutsigiro rweAV1 uye Python 3 | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore maviri ebudiriro, uye kunyangwe inogona kuyedzwa kubvira zhizha rapfuura, Kodi 19 ya iwe unogona kukopa. Iyo codename yavakashandisa ndiMatrix, iya yeakakurumbira trilogy (iyo ichakurumidza kubatanidzwa neyechina firimu) inotarisana naKeanu Reeves uye kupi, ini ndinofungidzira kuti uyu haasisiri mupambi, vanhu vanogara mune imwe mhando yeakanaka hope kuitira kuti michina inogona kutishandisa semabhatiri.
Iyi ndiyo yekutanga vhezheni iyi, uye ichave iri kusimudzira angangoita mamwe makore maviri kusvika pakatangwa Kodi 20, ine codename inofanira kutanga naN.Sekuvandudza kukuru, havana kungo tarisa kugadzirisa bugs, asi vaunza nhau senge tsigiro yeAV1 codec uye izvo izvo chete Python 3 ndiyo inoshandiswa. Python 2 haisisiri kutsigirwa, izvo zvinogona kukonzeresa matambudziko kune maadons kudzamara vagadziri vadzo vavandudza.
1 Kodi 19 Matrix inosimbisa
2 Munguva pfupi iri paPC yako ...
Kodi 19 Matrix inosimbisa
Tisati taenderera mberi, isu tinofanirwa kuraira kuti izvo zvatakanyora pakutanga kwechinyorwa chino, ndiko kuti, Kodi 19 ikozvino inogona kutorwa pasi hazvireve kuti kuburitswa kuri 100% pamutemo. Chikwata chevagadziri chakatotakura dzimwe shanduro kuseva yavo, senge inogona kuisirwa Windows, asi hazvizove kusvika maawa mashoma (kana rimwe zuva) kuti vazivise kuvhurwa pawebhusaiti yavo uye pasocial network.
Izvi zvakatsanangura, Kodi 19 Matrix anosvika nenhau idzi:
Python 3, ndokusiya vhezheni yapfuura.
Mutsva Matrix-yakavakirwa mufananidzo wemimhanzi.
Nyowani marongero emumhanzi kuratidza kuti otomatiki avhure kuzere skrini kana kutamba kwatanga.
Kunatsiridzwa mukutungamira kwemazhinji-disc CD mapakeji uye masokisi emabhokisi, pamwe nemazuva ekuburitsa disc.
Tsigiro yakawedzerwa kuti ichinje kuwanda kwemavara ezasi uye nyowani yakasviba grey yakawedzerwa kune iwo ma subtitles.
Wakawedzera rutsigiro rwemategi emafaira pamusoro peHTTPS.
Yakagadziridzwa yemhando yekutarisa yePixel Art mitambo.
Wakawedzera rutsigiro rwevamwe bicubic OpenGL vanokwira.
Iyo default theme, Estuary, yakagadziridzwa, semuenzaniso, neiyo nyowani "Kutamba Zvino" yekutarisa mimhanzi, uko kunoratidzwa ruzivo. Dingindira rinotsigirawo kuratidza ruzivo nezve zvitsauko zvemavhidhiyo emimhanzi.
Iyo PVR module yakawedzeredzwa nerutsigiro rwezviyeuchidzo, mapoka eTV uye nhepfenyuro nzira, majeti echiratidziro chikuru uye akasimba PVR zvikamu zvehurukuro huru, ndiko kuti, muEstuary. Iwo manejimendi emapoka uye chiteshi akagadziriswazve, kutanga kweEEPG zvinowedzerwa sezvo hupenyu hwave kutsigirwa izvozvi uye zvimwe zvimwe zvinatsiridzwa.
Vashandisi veLinux havachafanirwe kusarudza imwe bhaariari zvichienderana nenzvimbo, sezvo yakajairwa ikozvino yashandiswa X11, Wayland uye GBM.
Pa Android, rutsigiro rweiyo static HDR10 yakawedzerwa kune ese marudzi ezviwanikwa uye Dynamic Dolby Vision HDR inotsigirwawo nekushambadzira masevhisi, chero bedzi mudziyo uchitsigira.
PaIOS, panenge pasina kana munhu anoishandisa nekuda kwekuda kwekuparadzwa kwejere, shandisa zvisingavimbike masosi kana kusaina IPA neakaundi account, ikozvino inotsigira vatambi vemitambo yevhidhiyo yeXbox, PlayStation uye zvimwe zvinonyaradza.
Munguva pfupi iri paPC yako ...
… kungodaro daro. Pari zvino uye sezvatatsanangura, inogona kutotorwa pasi paWindows, asi iyo Linux vhezheni inotora nguva yakati rebei kusvika. Chinhu chekutanga chatinogona kuisa, kunze kwekushamisika, chichava icho Flatpak vhezheni, uye zvakare kana isu takawedzera iyo yepamutemo dura reprojekiti, sezvakatsanangurwa muayo Wiki, inowanikwa pano. Vaya pakati penyu vanosarudza kushandisa vhezheni yepamutemo vanofanirwa kumirira kwenguva yakareba, nekuti, semuenzaniso, izvo zvinowanika mumabhuku eUbuntu, zvinova ndizvo zvandakakwanisa kuongorora, Kodi 18.8, v18.9 yatovepo .XNUMX yesoftware kwechinguva.
Chero zvazvingaitika, patova neshanduro nyowani yeKare, uye kukwidziridzwa kwakakodzera… kana iwe usingatsamire paPython 2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kodi 19 Matrix inouya nerutsigiro rweAV1, Python 3 uye izvi zvimwe zvinhu zvitsva, asi kuvhurwa hakusi pamutemo izvozvi
Ivo vatove vari kuisa kuraira pamapeji eKODI kuitira kuti ndirege kuvandudza nekuti zvinogona kunge zvisingawirirane neazvino addons ...
(Dambudziko rakagadziriswa mumavhiki).
Mhoro Diego. Aya ndiwo mapindiro akaita posvo. Python 2 yatosiiwa uye Kodi aibvisa, saka kana iwe uine addon inovimba nePython 2, inogona kutadza. Asi iye anovandudza anofanirwa kugadzirisa mumazuva.
Imwe sarudzo ine vashandisi veLinux ndeyekuti tinogona kuisa vhezheni kubva kuzvitoro uye zvimwe zvakaita seFlathub, saka tinogona kuyedza pasina njodzi.
Kufambisa kunosvika sechishandiso chepamutemo (kwete webhu) kuUbuntu Kubata